Fedora 28 Torolàlana momba ny fametrahana XNUMX Avy amin'ny Linux
Fedora 28 Torolàlana momba ny fametrahana tsikelikely
Taorian'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny kinova Fedora 28 izay lazainay eto amin'ny bilaogy, maro amin'ireo mpampiasa azy no nanomboka ny fifindra-monina nanomboka ny Fedora 27 mankany amin'ny kinova vaovao.
aza manana safidy hanao izany isika raha tsy mametraka indray, soso-kevitra foana ny mametraka avy eo am-boalohany miampy ho an'ireo mpampiasa vaovao rehetra ananan'izy ireo, aryIzany no antony hizaranay aminao ity torolàlana fametrahana tsotra ity.
Ity torolàlana ity dia natao ho an'ny vao manomboka, miampy fanovana vitsivitsy natao tamin'ny fizotry ny fametrahana azy io izay mahamety kokoa ny mpampiasa.
1 Sintomy ary omano ny laharam-pahamehana fampidirana medium
2 Ahoana ny fametrahana ny Fedora 28?
Sintomy ary omano ny laharam-pahamehana fampidirana medium
Ahoana ny fametrahana ny Fedora 28?
Efa niomana amin'ny fitaovana fampidiranay, manohy mandefa azy amin'ny solo-sainantsika izahay izay hampiseho an'ity efijery manaraka ity raha manatanteraka ny fizotran'ny fandraketana an-tsary ny sarin'ny rafitra tsara isika:
Hisafidy ny safidy voalohany isika ary tsy maintsy miandry azy io isika mba hameno ny zavatra ilaina rehetra hanombohana ny fizotry ny fametrahana.
Vita io dia miandry kely isika, ary hiseho ny efijery iray hafa izay manome antsika ny safidy afaka hizaha toetra ny rafitra tsy mila mametraka (Live Mode) na ny safidy hanombohana ny fizotran'ny fametrahana.
Handeha tsindrio hametraka isika ary ny Instant Wood dia hanokatra ny mpamosavy Fedora.
eto Hangataka amintsika hisafidy ny fitenintsika sy ny firenentsika koa izany. Vantany vao vita izany dia manohy izahay.
Raha toa ka nametraka ny Fedora tamin'ny kinova taloha ianao dia mety ho tsikaritranao fa manana safidy vitsivitsy fotsiny ny installer.
Eto ihany ahitsinay ny faritry ny fotoanantsika raha ilaina izany.
Raha tsy izany ihany hisafidy ny safidy "Toerana hametrahana" isika
Indro misy manome antsika ny safidy hisafidianana ny fomba hametrahana an'i Fedora:
Fafao ny kapila iray manontolo hametrahana Fedora
Izahay mihitsy no mitantana ny fizarazaranay, manova ny haben'ny kapila mafy, mamafa ny partitions sns. Ny safidy atoro anao raha tsy te ho very vaovao ianao.
Aorian'izay hisafidy fizara izahay hametrahana Fedora na hisafidy ny kapila mafy. Raha misafidy fisarahana isika dia tsy maintsy omentsika azy ny endrika mety, mijanona toy izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Fedora 28 Torolàlana momba ny fametrahana tsikelikely
Miguel Cisneros dia hoy izy:
Raha tohizana ny famoahana vahaolana open source tsy misy fanaraha-maso, dia tsy hahomby satria mitombo hatrany ny faharanitan-tsaina artifisialy ary rehefa mandeha ny fotoana dia mety hitranga ny revolisiona sy ny fanjakazakan'ny solosaina amin'ny maha-olombelona ...
Valiny tamin'i Miguel Cisneros
123 dia hoy izy:
Salama aho, manana olana aho, sendra misintona ny iso 28 an'ny linux amin'ny pejy aho satria ao amin'ny Fedora manoratra dia azoko ihany ny 26 voafidiko ny safidy hanamboarana azy hisafidy ilay sary iso 28 izay sintomiko dia soratako ary ny dingana rehetra dia ara-dalàna sy tsara. na izany aza rehefa handeha hametraka azy aho dia mahazo fa nianjera ny iso .. amin'ity tranga ity inona no azoko atao?
Valio ny 123
Andramo ny manondraka sy manamarina ny MD5 hanamarinana fa tsy simba ny ISO.
AppImageLauncher: mandefa sy mampiditra fampiharana mora foana ao amin'ny Appimage
Hatsarao ny asan'ny touchpad ary afindra ny bokotra bara misy ny lohateny ao amin'ny Ubuntu 18.04